Chọpụta agwaetiti kachasị mma na Gris | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Greece, Islands
Gris nwere ọtụtụ agwaetiti na anyị enweghị ike ịhụ kpamkpam, mana anyị maara na ụfọdụ bụ ndị isi. Ọtụtụ n'ime ha abụrụla ebe ndị njem nleta na ihe dị mkpa maka nnukwu ịma mma ha, ebe nrọ na-enye anyị nnukwu ọdịbendị na ọdịdị mara mma. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji lee anya nke kachasị agwaetiti mara mma na Gris.
En Greece enwere ọtụtụ agwaetiti enwere ike ịga leta, ọtụtụ n'ime ha nwere ike isi Atens bịa. Ya mere, dee ndepụta ebe ị kwesịrị ịhụ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịhụ n'akụkụ ọ bụla nke Gris. Oke mmiri dị na Mediterenian dị mma iji nwee ọmarịcha osimiri ya mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ.
Agwaetiti Santorini bụ otu n'ime ebe ndị njem kacha njem na Gris. Agwaetiti a mara mma dị nso Atens n'ụgbọ mmiri. Na Oia obodo bu otu isi obodo na ebe nke di ezi njem ugbua, nke nwere otutu ulo. Mana ọ bụkwa ebe kachasị mma n'àgwàetiti ahụ, nke nwere ụlọ ọcha ya nwere elu ụlọ na-acha anụnụ anụnụ na echiche ya banyere oké osimiri, karịsịa n'oge ọdịda anyanwụ. Ga-agbadata ọdụ ụgbọ mmiri ochie iji hụ obere ụgbọ mmiri azụ, ikuku na obere ebe ị ga-anụ ụtọ gastronomy Greek. Fira bụ ebe ọzọ kachasị amasị ndị njem nleta ịnọ na ị nwekwara ike ịhụ isi ihe ndị ọzọ dịka Imerovigli, Pyrgos ma ọ bụ Megalochori. Banyere osimiri ya, enwere ụfọdụ dịka Red Beach, nke a kacha mara amara maka agba aja ya ma ọ bụ Perissa, osimiri mara mma ojii.
Nke a bụ agwaetiti ndị ọzọ dị na Gris, ebe Colossus nke Rhodes dị, nnukwu akpụrụ akpụ nke ala ọma jijiji bibiri ala ọma jijiji ọtụtụ narị afọ gara aga. Obodo ochie ya bụ ebe mara ezigbo mma agaghị echefu. N'ime obodo a enwere ebe dị ka nke ochie Calle de los Caballeros, a mara mma cobbled n'okporo ámá ebe ị pụrụ ịhụ Obí nke Ukwu Master ma ọ bụ ndị delọ Ọgwụ de los Caballeros. Ebe ndị ọzọ a pụrụ ịhụ bụ Ebe Ndebe Ihe Ochie nke Rhodes ma ọ bụ Acropolis.
La Agwaetiti Mykonos bụ ebe ọzọ a na-achọkarị, karịsịa ebe ọ bụ agwaetiti ebe enwere ọtụtụ ebe maka oriri na nkwari. Na Mykonos ị ga-enwe obi ụtọ na obodo ochie nke Chora, na-agagharị n'okporo ámá ya ma na-achọta ụlọ ndị mara mma na ebe dịka mpaghara Kastro. Ndị na-agba ọsọ na Kato Milli abụrụla ụlọ ọrụ dị na agwaetiti ahụ ma site na ebe ha nwere echiche dị mma. Also ga-ahụkwa ọdụ ụgbọ mmiri ochie, mpaghara ebe ị nwere ike ịchọta ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, na Little Venice, ebe kachasị maa mma n'ihu oké osimiri.
Obodo Corfu na agwaetiti otu aha bu ebe ikwusi ebe o nwere otutu ihe. La Spianada bụ otu n'ime ebe kachasị ukwuu na Gris, nso nke anyị nwere ike ịhụ Obí nke San Miguel na San Jorge, ebe Museum nke Asia Art dị. Ebe ndị ọzọ bụ Obí nke Princess Sissi, nke bụ Obí Achilleion nke Empress Sissi gbagara ma ọ bụ oke osimiri Corfu.
La agwaetiti mgbawa ugwu nke Milos bụ nke ọzọ anyị nwere ike ịga leta. O nwere ihe dị ka osimiri iri asaa ma nwee ọtụtụ aja ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ihu igwe dị mma, dịka Sarakiniko ma ọ bụ Paliorema. Kleftiko bụ ihe ọzọ na-akpali mmasị, usoro okwute dị n'etiti oké osimiri nwere netwọkụ ọgba. Milos catacombs dị na Trypiti so na ndị ochie achọpụtara, nwere obere akụkụ ghe oghe. A gaghị agbaghara Plaka, bụ isi obodo Milos, ya na ụlọ ọcha ya ndị mara mma yana ebe egwuregwu Roman ya na-anọ n'oké osimiri.
Crete bụ ebe akụkọ ihe mere eme ọzọ, yana agwaetiti mara mma nke ukwuu. On a agwaetiti ị pụrụ ịmụtakwu banyere Minoan mmepeanya, otu n'ime ndị kasị ochie mara na Europe. N'ihi ya bụ akụkọ ama ama banyere minotaur. Taa ọ ga-ekwe omume ileta Ebe obibi Knossos, di kilomita ole na ole site na Heraklion. N'ime isi obodo a, anyị na-ahụ ebe akụkọ ihe mere eme nwere n'okporo ámá ndị mara mma, n'ámá na ebe ndị dị ka ebe Koules siri ike ma ọ bụ Katidral nke San Minas. Obodo ọzọ agaghị echefu bụ Chania, ebe mara mma nke ukwuu, osimiri Elafonisi a ma ama na-esochi ya.
Agwaetiti a nke agwaetiti Ionia dị na Gris. Tụfuo ọtụtụ osimiri dị ka Navagio, nwere oke ugwu na ụgbọ mmiri tọrọ atọ na ájá. Onyinyo ya bụ otu n’ime ndị kacha mara amara n’àgwàetiti a, nke bụ ebe nrọ. Na Zante enwere ebe ozo ndi ozo anaghi agha dika ndi Blue Caves.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Agwaetiti kacha mma na Gris